बाख्राले माछा खाए पछि सबै च‘कित परे (भिडियो):: Mero Desh
बाख्राले माछा खाए पछि सबै च‘कित परे (भिडियो)
Published on: २५ आश्विन २०७८, सोमबार ०१:१९
काठमाडौं “।” कहिले काही त हा”मीलाई वि”श्वास नै गर्न नसकिने कुराहरु देख्न पाईन्छ । त्यस्तै एउटा अनौठो दृश्य देख्न पाईएको छ“। के तपाईंले कहिल्यै मां”साहारी बाख्रा देख्नु भएको छ ”? के तपाईंलाई लाग्छ कि बा”ख्राले घाँस
बाहेक मासु पनि खान्छ ? पक्कै पनि तपाईंले “यस्तो कुरा देख्नु भएको छैन।तर हालै भाइरल भइरहेको एक भिडियो ले तपाईंलाई अचम्ममा पार्नेछ । बाख्राले माछा खाइरहेको एकभिडियो सामाजिक सञ्जालमा खुबै भाइरल भइरहेको
छ “।”भिडियोमा एउटा बाख्रा टो”करीबाट माछा च”पाउँदै गरेको देख्न सकिन्छ ‘। भिडियो हेरेपछि मानिसहरुलाई यो कुरा विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको छ “।” मांसाहारी बाख्राले सबैलाई च”कित बनाएको छ“ ।”बाख्रा सामान्यतया घाँस,
पात वा अन्न खान्छ । तर भिडियोमा देखिएको बाख्रा माछा खाइरहेको छ । मानिसहरु अचम्ममा परेका छन् । ‘बाख्राले माछा खा”इरहेको भिडियो इ”न्स्टाग्राम र ट्वि’टर ल’गायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा सेयर हुँदैछ ।”जब
कुनै पनि जनावरले केहि असामान्य व्यवहार गर्छ, मानिस हरु त्यसलाई हेर्न चाहन्छन् ‘‘।” त्यसैले यस्ता भिडियो हरु समय समयमा भाइरल भइरहेका हुन्छन् । भिडियो हेर्नुहोस्